IMM က 'metrobus ခရီးသည်သည်အမ်စတာဒမ်၏လူ ဦး ရေနှင့်တူညီသည်' နယ်သာလန်မှအမှိုက်ထဲသို့ပစ်ချလိုက်သည့်ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာတန်ဘိုးရှိသော metrobus | RayHaber | raillynews
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီMarmara ဒေသကြီး34 အစ္စတန်ဘူလ်သူသည်နယ်သာလန်ထံမှလက်ခံရရှိသန်းဒေါ်လာအမှိုက်ပုံးစိတ်ထဲ IBB '' Metrobus ခရီးသည်သည်အထိအမ်စတာဒမ်၏လူဦးရေမှာ '' Metrobus လာ. ,
16 / 03 / 2017 34 အစ္စတန်ဘူလ်, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, ဘီးစနစ်များ, Metrobus, တူရကီ
အမ်စတာဒမ်လူဦးရေအထိ IBB '' Metrobus ခရီးသည် "ဟုသူကစိတျကူးအမှိုက်ပုံးနယ်သာလန်သန်း Metrobus ထံမှယူဆိုပါတယ်ရောက် လာ. , တွစ်တာ"? အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးသင်သိတာလားကျွန်တော်အမ်စတာဒမ်လူဦးရေကနေပိုပြီးခရီးသည်သယ်ဆောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Metrobus လိုင်းနှင့်အတူနေ့စဉ်နေ့တိုင်း "ဟုအဆိုပါအကောင့်မေးလျှင်" "စိတ်ထဲမေးခွန်းများ အမှိုက်ပစ်ချ 200 ဒေါ်လာသန်းဘတ်စ်ကားမှယူဆောင်ထို့နောက်နယ်သာလန်ကနေနှင့်အစ္စတန်ဘူလ်မှအဆင်ပြေမဟုတ်ပါဘူး။
"အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေး" twitter အကောင့်ကိုမေးသော်နှင့်နယ်သာလန်နှင့်အတူတင်းမာမှုများကိုရည်ညွှန်းနယ်သာလန် Metrobus အညီထူထောင်ခံရခြင်းမှမေးခွန်း "Metrobus လိုင်းခဲ့, ငါတို့? ကျွန်တော်အမ်စတာဒမ်နှင့်အတူနေ့စဉ်နေ့တိုင်းပိုပြီးလူဦးရေထက်ခရီးသည်သယ်ဆောင်ကိုသိ" နှင့်အစ္စတန်ဘူလ်ဝေးသိပ်သည်းဆတွေ့ဆုံထံမှကြောင့် အသုံးပြု. မရပါ Metrobus သန်းဒေါ်လာစိတ်ထဲဆောင်ခဲ့လေ၏။
ဒတ်ခ်ျကုမ္ပဏီ Phileas ၏ကာလ၌ရှိသကဲ့သို့ 1,5 တယောက်ကိုသိမ်း ယူ. ခဲ့သည်အနေနဲ့မတန်တဆစျေးနှုန်း (ထိုကာလ 2,1 သန်းကျော်ငွေလဲနှုန်း) သူတို့ထံမှ Metrobus လိုင်း 100 ယူရိုသုံးစွဲဖို့ဖွင့်လှစ်။ ရွေးချယ်စရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစ္စတန်ဘူလ် Apr အဖြစ်အကောင့်သို့ခရီးသည်များ၏သိပ်သည်းဆတာမရှိရင်ဘောလုံးကို Metrobus စီမံကိန်းအတွက်အသက်တာ၏အစောပိုင်းကာလများတွင်ပြိုကျသွားတယ်။ နယ်သာလန်နိုင်ငံကနေဘတ်စ်ကားအစ္စတန်ဘူလ်အခြေအနေများတော်ပါတယ်မဟုတ်ကြလို့ပဲ။
အဆိုပါအစ္စတန်ဘူလ်ဘတ်စ်ကား 17 သန်းနှင့်သဟဇာတမဖြစ်သောနယ်သာလန်ကနေ Metrobus လိုင်းများအတွက်တိုင်းပြည်လူဦးရေရဲ့။ အားလုံးတဦးတည်းအစ္စတန်ဘူလ်အတွက်နယ်သာလန်ရင်ဆိုင်ရဖို့ရှိပါတယ်, ခုနစျပါးတိုင်းတာခြင်းခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်နယ်သာလန်အားလုံးလူ့လူဦးရေနေထိုင်ခဲ့တယ်။ ခရီးသွားလာရန်ဘတ်စ်ကားများတွင်ငါး, ဒေါ်လာသန်းဘတ်စ်ကားပင်ပန်းခဲ့ကြနှင့်ကအလုပ်မလုပ်ပါဘူးလုပ်ကိုပိုပြီးကြမ်းတမ်းမြေပြင်အနေအထားတွင်ပိုမိုလွှမ်းခြုံအလုပ်လုပ်ကြသည်။
ကသစ်ကိုဒေသခံရွေးကောက်ပွဲများနှင့်အတူဖြစ်နိုင်နေစဉ်ဘတ်စ်ကားပိုခရီးသည်သယ်ဆောင်ရန်အများကြီးစျေးသက်သာ, အနိုင်ရတဲ့ Kadir ရဲ့တောငျးဆိုခကျြကျွန်တော်တို့ရဲ့လူတွေဖွုနျးတီးဒေါ်လာစာသားသန်းပေါင်းများစွာစေခဲ့သည်။
မျှမျှတတအခြေအတင်ဆွေးနွေးဘယ်လိုများအတွက်ပြသသောထိုနေ့ရက်ကာလ၌, Kadir Topbas Metrobus နယ်သာလန်ခိုင်မာသောရပ်တည်ချက်။
ဒတ်ခ်ျ Phileas ဘတ်စ်ကား 250 လူတွေအများဆုံးဥပမာအားဖြင့်, စွမ်းရည်တင်ဆောင်နေစဉ်, မာစီဒီးစွမ်းဆောင်ရည် 220 ခရီးသည်သယ်ဆောင်နိုင်လေးခုဘတ်စ်ကားများတွင်တဦးတည်း၏စျေးနှုန်း။ ဒါကြောင့်အခြားအမှတ်တံဆိပ် Metrobus သိုက်ကိုရွေးချယ်ခြင်းမှ Phileas 1 အကြောင်းကို 900 ကလူတစ်ဦးတင်ဆောင်လာသောစွမ်းရည်နှင့်အတူရယူနိုင်ပေမယ့်သေးခဲ့သည်။ တောင်းဆိုမှုများသောကြောင့်, "ကားမောင်းသူမပါဘဲ" branded Phileas ဘတ်စ်ကားအလုပ်လုပ်နိုင်ပါကတစ်ဦးထက်ပိုအဆင်ပြေသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပူဇော်ကြောင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ အစ္စတန်ဘူလ်၏လူဦးယခုအချိန်အထိယာဉ်မောင်းမပါဘဲအပြေးဘတ်စ်ကားကြည့်ဖို့လည်းmetrobüslအတွက်ဤစွပ်စွဲချက်မှန်ခြင်းရှိမရှိနှင့် ပတ်သက်. အလုံအလောက် data တွေကိုကမ်းလှမ်းအလွန်ကျန်းမာရေးအန္တရာယ်နှင့်မသက်မသာအခြေအနေများသွားလာရန်။
ထို့ကြောင့်, အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်အစ္စတန်ဘူလ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်တွင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ဘဝထက်ပိုမို 200 သန်းဒေါ်လာကုန်ကျခဲ့ကြောင်းမတိုင်မီထိုပြဿနာကို Metrobus စီမံကိန်းအဖြေကိုသိမထားဘူး "အပန်းဖြေ" ဒီနေ့မေးတယ်။
အရင်းအမြစ်: haber.sol.org.t ဖြစ်ပါသည်
နယ်သာလန်နိုင်ငံကနေခေါ်ဆောင်သွား Metrobus အပိုင်းအစကိုစတင်ခဲ့ကြ
UIC Highspeed 2008 တရားမျှတသော - အမ်စတာဒမ်အဆိုပါနယ်သာလန်
ဓါတ်ရထားလေယာဉ် Samsun (ဗီဒီယို) တွင်ဆိုက်ရောက်
Samsun ဓါတ်ရထားဧရာလေယာဉ် (ဗီဒီယို) ဆိုက်ရောက်
အစ္စတန်ဘူလ်မက်ထရိုနှင့် metrobus တဲ့အခါမှာ IETT တက်အခမဲ့
အမ်စတာဒမ်အတွက်တိုက်မိနှစ်ဦးအားရထား, 136 ဒဏ်ရာရ
အမ်စတာဒမ်က Metro မြေပုံ
RayHaber 16.03.2017 ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတင်းလွှာ
Artvin လေကြောင်းလိုင်း IMM ကတည်ထောင်ခံရဖို့ပျံသန်းဦးမည်